Madaxweynaha Degaanka Somalida Ethiopia oo u Duulay Ingriiska – Rasaasa News
Madaxweynaha Degaanka Somalida Ethiopia oo u Duulay Ingriiska
Mar 1, 2012 Madaxweynaha Degaanka Somalida Ethiopia oo u Duulay Ingriiska
Socdaalka Madaxweynaha degaanka Somalida Ethiopia mudane Cabdi Maxamuud uu ku tagayo London, waxaa ku weheliya qurbo joog u dhalatay degaanka Somalida iyo taageerayaal ururkii ONLF ee nabada qaatay 2010.
Ujeedada safarka madaxweynaha ayaa la xidhiidh labo arimood; ka qayb galka shirka lagu oogayo iibka daynta [bonds] ee biyo xidheenka Abbay iyo dhamaystirka xidhiidh ka dhashay safar hore sulxis u bilowday ururada mucaaradka ah.
Madaxweynaha ayaa ka qayb gali doona shir balaadhan oo lagu qaban doono dhismaha safaarada Ethiopia ee London bisha March 4, 2012. Shikaas oo lagu soo bandhigi doono sharaxaada lacagta daynta ah ee loo yaqaan [bonds] ee loo uruurinayo dhismaha biyo xidheenka Abbay. Gadashada bonds iyo u soo bandhigeeda ayaa xiiso badan u leh qurba-joogta degaanka Somalida Ethiopia.
Madaxweynaha waxaa socdaalka ku weheliyo Janraal Cabdiraxmaan Khaliif Dhisic oo ka mid ah qurba-joogta Somalida ee degan Canada. Cabdiraxmaan Khaliif Dhicis oo ay saaxiib dhaw yihiin Jwxo-shiil, ahna dhigiis, ayuuna safarkiisu ahayn mid mid fudud.
Warar hoose ayaa sheegaya in safarka Janaral Cabdiraxmaan Khaliif ee London uu yahay hal ujeedo, oo ah kulan dhexmara isaga iyo Jwxo-shiil, laakiin lama saadaalin karo in Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu ka mid noqon kulanka.
Waxaan hore ula soconaa in heshiiskii hore u dhexmaray ururka ONLF iyo dawlada Ethiopia uu bilowday, ka dib kolkii Cabdifataax Sheekh Cabdulahi [yare] iyo wafti la socday oo ay ka mid ahaayeen qurbo joog ka soo raacday Addis Abab ay Jarmalka ugu tageen Salaxudiin.
Kooxda Jwxo-shiil, ayaa itaal gabtay, laakiin u baahan Agas iyo aamusiin walaaltinimo si ay wax uga iibsadaan bonds-ka biyo xidheenka Abbay.
Ogeysiis: Dhamaan Dadweynaha Somalida Ethiopia ee Deggan Dalka Ingriiska